China ngwa ngwa atụ prototype gold plating PCB na Counter imi oghere emepụta na suppliers | Kangna
ngwa-atụ n'aka prototype gold plating PCB na Counter sink onu
Min trace obosara / ohere: 6 mil
Min oghere size: 0.30mm
Emechara mbadamba osisi: 1.20mm
Solder nkpuchi agba: green “
Ebute oge: 3-4 ụbọchị
Solder nkpuchi agba: green``
Oge a bụ oge kachasị mkpa maka mmemme nyocha na mmepe.
Iji Mkpebi nnyocha na mmepe oge, ị chọrọ PCB emeputa na-emepụta prototype ngwa ngwa.
Mgbe ahụ, ngwa ngwa ntụgharị ngwa ngwa pụta.
Maka n'ichepụta PCB, Kangna nwere ahụmịhe nke n'ichepụta PCB maka ihe karịrị afọ 14 (kemgbe 2006). Họrọ anyị nwere ike ọ bụghị naanị na-ebelata oge nrụpụta nke PCB kamakwa ọ na-ebelata ụgwọ ma nweta mbadamba dị elu. Anyị nwere ike ịnye gị ụdịrị dị elu dị elu yana oge kachasị mkpụmkpụ na ọnụahịa asọmpi.
Nọmalị, ma ọ bụrụ na ngụkọta ebe gị odered PCB bụ ihe na-erughị 0.1 square mita, anyị na-iji ka prototype.
Enweghi oke MOQ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nye iwu otu PC, anyị ga-anakwere iwu ahụ nke ọma.
Oge ndu kwesiri bụ ụbọchị ise maka otu akụkụ na mbadamba abụọ, ụbọchị 7 maka 4 oyi akwa, ụbọchị 9 maka 6 oyi akwa, ụbọchị iri maka 8 oyi akwa, ụbọchị iri na abụọ maka mbadamba 10.
N'ihi na ngwa ngwa prototype, anyị nwere ike rụchaa mmepụta nke prototype nke otu kwadoro na abụọ oyi akwa osisi n'ime otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ, 3-4 ụbọchị maka 4 oyi akwa, 4-5 ụbọchị maka 6 oyi akwa, 5-6 ụbọchị maka 8 oyi akwa, 6 -7 ụbọchị maka 10 oyi akwa osisi.
Obere ụbọchị ọrụ, ọnụahịa dị ọnụ.
Mgbe ị nabatara iwu gị, injinia anyị ga-enyocha faịlụ Gerber gị iji jide n'aka na ọ na-agbaso ike ọrụ anyị. Ozugbo faịlụ ndị ahụ gafere nyocha ahụ, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ. Mgbe ahụ injinia anyị ga-enyocha ọzọ ma bulie faịlụ ahụ iji mepụta ya. Mgbe ụfọdụ ụfọdụ ajụjụ injinia ga-akpali.
Iji mechaa mmepụta ahụ n'oge, ikwesiri ịzaghachi ajụjụ injinia nke injinia anyị n'oge ọ bụla.
Oge etinyere na injinia ajụjụ agụghị dị ka oge mmeputa.
Ọ bụrụ na ị nye iwu mgbe P5.00 china gasịrị, a ga-agụpụta oge mmepụta site na ụbọchị echi.
Nke gara aga: PC obere SMT Assembly dị ala
otu aka nke imikpu ọla edo dabere na Board
3 oz solder nkpuchi ịkwụnye ENEPIG arọ ọla kọpa b ...
1.6mm ngwa ngwa prototype ọkọlọtọ FR4 PCB
Resin ịkwụnye oghere Microvia Imikpu ọla ọcha H ...
6 oyi akwa impedance akara isiike-Flex osisi na ...